Iibhokisi zePenthouse - I-Airbnb
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguKapil
I-3 BHK, i-airconditioned ngokupheleleyo, umgangatho ophezulu, ukuphakama kabini kwePenthouse, ehlala eCandolim kunye nemizuzu emi-5 yokuhamba ngeenyawo zakho kumanzi olwandle, ukuhamba ngemizuzu emi-3 ukuya kwindawo yokutyela yaseGoa kunye ne-100 yezinketho zokukhetha kwiivenkile zamazwe ngamazwe. Ukuqhuba kwemizuzu emi-5 kukhokelela kwiiklabhu zasebusuku ezi-5 ezidumileyo. I-penthouse iyilwe njenge-NY loft: isilingi ende, ukukhanya kwendalo okuninzi, iifestile ezigcwele ubude, i-AC, imigangatho yeplanga kwaye songeze ezinye izinto ezinqabileyo ezifana * nezipili phezu kweebhedi * zezo zihlandlo ze-instagram ezikhohlakeleyo.
IBoxers Penthouse kukuzinikela kwam kwisithixo sam, u-Muhamad Ali, ibhokhwe. Ubukhulu buka-Ali babungekho nje kumdlalo wakhe wamanqindi, uphumelele ngama-56 kwimilo engama-61, ii-KO ezingama-37. Kungaphaya komsesane kwindlela aphila ngayo kwaye waphefumlela izigidi ukuba zilwele amalungelo abo. Ngokungathandabuzekiyo, imibongo yakhe yayisonwabisa njengesihogo. Kwi-penthouse ye-Boxers uzame ukukunika umbono wobomi bakhe ngendlela yeepowusta, iincwadi, iimuvi, imidlalo kunye nemibongo yakhe. Ndiyathemba ukuba uyakukonwabela ukuhlala kwakho kamnandi ngelixa ufunda ngeGOAT kwaye ujike izihlunu okanye wenze isangqa se-Ali Shuffle okanye u-Ali kunye noJab (ngomngcipheko wakho, haha).
Iintsuku eziyi-7 e Candolim
ICandolim yindawo edlamkileyo, edume ngabakhenkethi baseBritane ngexesha lonyaka kunye neeklabhu zasebusuku ezininzi kunye neeresityu, ezinye zazo ezivulwa ubusuku nemini. Akufuneki ukuthetha, i-candolim beach yenye yezona zicocekileyo kwaye zilungele ukuxhoma kunye namatyotyombe angapheliyo kunye neeklabhu zaselwandle kuzo zonke iintlobo zebhajethi.
Umbuki zindwendwe ngu- Kapil
Ndiyafumaneka ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye unqwenela nje ukuncokola ngeGOAT/Ali.